Saamaynta iyo faa'iidada isticmaalka dabaqa shubka ah ee suufka qallalan ee qalalan
Sagxada shubka ah ee suufka qallalan waxaa loo isticmaalaa sifaynta iyo simida ka dib marka sagxada shubka la sameeyo.Waxaa loo isticmaali doonaa mashaariic iyo dhismo badan.Waxay leedahay adkeysi wanaagsan iyo natiijooyin.Si fidsan ka dib.Ma jiri doono godad keega iyo ciid, waana nooc ka mid ah suufka qallalan ee wax lagu shiido si kor loogu qaado tayada iyo nolosha dabaqa shubka ah.
Sagxada la taaban karo ee suufka qallalan ayaa ku habboon oo fudud in la shaqeeyo.Waxaan aaminsanahay in dad badan ay isticmaali doonaan, laakiin natiijooyinka shiididu maaha kuwo isku mid ah.Qaar ka mid ah natiijooyinka dhismaha ayaa wanaagsan, qaarna natiijooyinka dhismuhu maaha kuwo ku habboon.Maxaa sababay arrintan?
1. Tallaabada dhalaalaysa, isku day inaad isticmaashid aashitada daciifka ah ama budada nadiifinta dhagxaanta dhexdhexaadka ah.Budada aashitada nadiifinaysa waa mid aad u aashito ah, taas oo gubi doonta dusha marmarka.Habka khiyaamada ee aan la nadiifin hadhaaga ka dib markii la nadiifiyo ayaa sidoo kale baabi'in doonta oo ballaarin doonta khadadka iyo godadka, taas oo keeni doonta dhibaatooyin badan.Ciqaabta godka, oo waxay keentaa dhibaatooyin dhibsado sida dhagax jaale ah.
2. Miisaanka suufka qallalan ee dabaqa shubka ah waa barta muhiimka ah.Kaliya haddii uu ka badan yahay 150KG ayaa la simi karaa oo dhulka la dhigi karaa.Haddii ay tahay Furimaha Dagaalka yar oo miisaan ku filan, waxaa jiri doona undulations cad.Waxay ku habboon tahay oo kaliya meelaha yaryar ama shiididda bilowga ah, ama shiididda.Daaweynta dusha sare ee crystal.
3. Marka suufka qallalan ee qallafsan lagu dhejiyo dabaqa shubka ah, haddii isticmaalka biyaha aan si fiican loo koontaroolin, way fududahay in la kiciyo qoyaanka dhoobada sibidhka ee hoose ee dhagaxa si ay u rogaan qoyaanka;kor u kaca calcium hydroxide iyo ubax cad.
Wacanbacaadka la taaban karowaxay ku fiiqan yihiin shiididda, waxay ku fiican yihiin caabbinta kulaylka, waxayna leeyihiin faa'iidooyinka dhaldhalaalka degdega ah, dhalaal wanaagsan oo aan luminayn iyada oo aan la beddelin midabka dhagaxa laftiisa.
Sagxadaha sibidhka ee sagxadaha qalalan ee wax lagu shiido waa nooc ka mid ah suufyada qallalan ee la dhoofiyo.Waxay leedahay muuqaal nadiif ah oo qurux badan, jilicsanaan wanaagsan, waxaa lagu duubi karaa kala badh, mana jiraan wax dillaac ah oo dammaanad qaadaya.Waa suuf shiidid guud ee marmar, granite, dhagax quartz, iwm, oo leh fiiqan oo xidho iska caabin.heerka tixgelinta.Sagxadda sibidhka suufka qallalan ee wax lagu shiido waxay dhamaystiri karaan shiida iyo turxaan bixinta dhagaxa, dhalooyinka, ceramics iyo godadka dhexda iyada oo aan lagu darin biyo si ay u qaboojiyaan.Shiididda iyo shiididda geesaha, fallaadho gudaha ah, fallaadho dibadda ah, diyaaradaha granite, marmar iyo dhagaxyo kale heterosexual, galaas, ceramics, geesaha, geesaha, diyaaradaha, iyo diyaaradaha dhexda dhoobada iyo qalab kale.
sagxadaha shiida ee la taaban karowaa qalab farsamaysan oo dabacsan oo laga sameeyay dheeman sida xoqan oo lagu daray walxo isku dhafan.Maro Velcro ah ayaa lagu dhejiyay dhabarka, taas oo lagu dhejiyay iskudhafka mashiinka wax lagu shiidayo.
z-libaax waa bixiye xirfadle ah oo ah xal polishing.Haddi aad ka shaqaynayso mashruuc shubka la sifeeyay, agabkeena tayada sare leh ee dheemanka ah ee sagxadaha shubka ah ayaa kaa caawin kara inaad ka dhigto shaqadaada shubka ah mid hufan, fudud oo fudud.Haddii aad xiisaynayso alaabtayada ama aad u baahan tahay wax soo saarkayaga, waxaad nagala tashan kartaa macluumaad faahfaahsan.